Ungayisebenzisa njani iBleach kwindawo yokuhlamba iimpahla ngokukhuselekileyo - Iingubo Zokuhlamba Iimpahla
Ungayisebenzisa njani iBleach kwindawo yokuhlamba iimpahla ngokukhuselekileyo
Ukufunda ukusebenzisa iblitshi kwindawo yokuhlamba ngokufanelekileyo kunokukunceda ukubulala iintsholongwane kumalaphu, wenze abamhlophe babe mhlophe, kwaye ususe amabala anzima. Unokulandela amanyathelo ambalwa okusebenzisa i-bleach ngokuhlamba iimpahla, kodwa umatshini wakho wokuhlamba kunye nokupakishwa kwebleach kunokukunika umkhombandlela othile. Gcina ukhumbula ukuba i-bleach isetyenziswa njengesisombululo esixutywe nokususwa kwebala okanye kumatshini wokuhlamba iimpahla; ayisetyenziswa kwisomisi.
Iindidi zeBleach oziSebenzisa ngokuhlamba iimpahla
Zimbini iintlobo eziphambili zeblitshi yolwelo oya kuyifumana xa usetyenziselwa ukuhlamba. Kubalulekile ukuqonda ukuba loluphi uhlobo lwe-bleach oyisebenzisayo ukuze ungonakalisi iimpahla zakho. Funda ipakeji yakho ngononophelo ukumisela uhlobo lweblitshi.
Uyenza njani iStatshi Samanzi: Iindlela ezikhuselekileyo nezilula
Ungayibulala njani intsholongwane kuLondolo kwiindlela ezilula nezisebenzayo
Iviniga kwindawo yokuhlamba iimpahla: Iidosi ezili-11 kunye neeDon'ts zokucoca iimpahla
I-chlorine bleach, eyaziwa ngokuba yi-liquid bleach yasekhaya okanye i-sodium hypochlorite bleach, luhlobo onokulusebenzisa abamhlophe. Iyabulala iintsholongwane, ihlambe, kwaye ibe mhlophe, kodwa akufuneki isetyenziswe kwiboya, isilika, i-spandex, i-mohair, okanye isikhumba.
Ibhlitshi engeyiyo iChlorine
I-non-chlorine bleach, ekwabizwa ngokuba yi-oxygen bleach okanye i-bleach ekhuselekileyo ngombala, inokusetyenziswa nakweyiphi na into enokuhlanjwa, nkqu nemibala kunye nobumnyama, ukususa amabala kunye nokuqaqamba.
Uvavanyo lokuQiniseka kombala
Ngaphambi kokusebenzisa i-bleach kunye nokuhlamba okungekho konke okumhlophe, vavanya intsimbi yokuqina kombala. Oku kuyacetyiswa kuzo zombini iintlobo zebhlitshi.
Hlanganisa i-1/2 yeetapuni ze-bleach kunye ne-1/4 indebe yamanzi. Sebenzisa awona manzi ashushu amalaphu awavumelayo.
Beka isambatho sakho kwindawo enzima engayi kuchaphazeleka yi-bleach.
Veza indawo efihliweyo yento efana nangaphakathi komphetho.
Dipha isiphelo esinye somqhaphu womxube kumxube we-bleach.
Beka ithontsi lomxube weblitshi kwindawo yakho efihlakeleyo.
Emva komzuzu omnye, cima iblitshi ngendwangu emhlophe de yome.
Ukuba umbala wento awutshintshanga, ungasebenzisa iblitshi kuyo ngokukhuselekileyo.
Amanyathelo okuSebenzisa iBleach njengesixhobo sokucoca iLaundry Stain Remover
I-Bleach sisixhobo esiqhelekileyo esisetyenziselwa ukususa amabala kumalaphu. Inokukuncedasusa amabala atyheli ezimpahleniokanye ususe amabala anzima njengeisethwe kumabala e-inki. Ukuba ufuna ukusebenzisa iblitshi njengosusa ibala ekuhlambeni iimpahla, kuhlala kufuneka kuhlanjululwe ngamanzi.
Inyathelo 1: Nxiba iimpahla zokuzikhusela
Akunyanzelekanga ukuba unxibe naziphi na izixhobo ezikhethekileyo xa usebenza neblitshi, kodwa kuyacetyiswa ukuze ungonakalisi iimpahla ozinxibileyo okanye ukonakalise ulusu lwakho. Ngaphambi kokuba usebenze nge-bleach, nxiba iimpahla ongazikhathalelanga. Ngale ndlela, ukuba uyaphala okanye uphalaze iblitshi, ayizukubaluleka ukuba impahla yakho yangoku iyakhanya.
Inyathelo 2: Hlanganisa iBleach neSisombululo saManzi
Ukusebenzisa i-bleach njengesikhombi sendawo, kukulungele ukugcoba yonke into kwi-bleach kunye nesisombululo samanzi. Unokongeza malunga ne-1/4 yekomityi yeblitshi yolwelo rhoqo kwitoni enye yamanzi kwibhakethi elicocekileyo okanye emgqomeni.
Uluhlu lwamaxabiso eenkonzo zokucoca indlu
Inyathelo 3: Cwina into
Ngenisa into leyo imizuzu emi-5, hlamba, kunye nomoya owomileyo. Ukufumana amabala anamafutha, yenza loo nto kwangaphambili ngokuthambisa isepha encinci yokuhlamba impahla kuyo kwaye uyiyeke ihlale imizuzu emi-5 ngaphambi kokungena kwisisombululo se-bleach.
Inyathelo 4: Hlanza kwaye Yomisa into
Ukuba unayo enye i-bleach-safe laundry to wash with the item, ungahlamba kwaye womile njengesiqhelo. Ukuba akukhange kubenjalo, unokuyicoca ngokucocekileyo into emva koko uyivumele ukuba yome.
umfazi oligosa utyikitya ukuba uyakuthanda
Indlela yokuhlamba iimpahla ngeBleach
Ungasebenzisa iblitshi koomatshini abaninzi bokuhlamba impahla. Ukufumana iziphumo ezilungileyo, landela izikhokelo ezidweliswe kwincwadi yomsebenzisi wokuhlamba. Landela la manyathelo alula ukuhlamba iimpahla ezinemibala nge-bleach ekhuselekileyo ngombala okanye abamhlophe nge-chlorine bleach.
Inyathelo 1: Cwangcisa Ubushushu boomatshini bokuhlamba
Uhlala ufuna ukuhlamba nge-bleach usebenzisa elonaqondo lobushushu lishushu kakhulu amalaphu akho avumelayo. Funda ifayile ye-iisimboli mpahlakwinto nganye oyihlambayo. Fumana into ngeqondo lobushushu elinconyelweyo kwaye usete umatshini wakho kobo bushushu.
Inyathelo 2: Qala umatshini wokuhlamba impahla
Ukuba awunayo i-bleach dispenser, qalisa umatshini wokuhlamba ngaphandle kokongeza isepha, iblitshi, okanye impahla yokuhlamba impahla. Ufuna amanzi kumatshini ukungxenga isepha kunye neblitshi.
Inyathelo 3: Yongeza isepha yokuhlamba impahla
Funda ileyibhile kwindawo yakho yokuhlamba impahla kwaye ungeze isixa esifanelekileyo ngqo emanzini ukuba awunayo itreyi yesepha. Ukuba unayo indawo yokuhlamba iimpahla, ungongeza isepha apho.
Inyathelo 4: Yongeza iBleach
Landela umkhombandlela kwi-bleach yakho ukongeza isixa esifanelekileyo. Ngokubanzi, uya kongeza i-1/2 indebe kwi-1 indebe ye-bleach eqhelekileyo yomthwalo kumthwalo. Ukuba une-bleach dispenser, ungongeza i-bleach ngqo kuyo ngokuzalisa umgca onikiweyo. Ukuba awunayo i-dispenser, yongeza iblitshi ngqo emanzini kwimizuzu emi-5 emva kokuba umjikelo wokuhlamba uqalile.
Inyathelo 7: Yongeza ukuhlamba kumatshini wokuhlamba
Nika iblitshi umzuzu okanye emibini ukuxubana emanzini. Ngoku ungongeza izinto zakho zokuhlamba iimpahla kwaye ugqibe ukuhlamba konke, uhlambe, kwaye ujikeleze imijikelezo.
Inyathelo 8: Ukuhlamba iimpahla okomileyo
Nje ukuba i-washer yenziwe, yoma impahla yakho ngokwemiyalelo yeethegi.
Inxalenye yokufundauhlamba ngokufanelekileyo impahlaufunda ukusebenzisa iimveliso zeblitshi ngokukhuselekileyo. Sebenzisa i-chlorine bleach yenyeindlela elula yokubulala iintsholongwane kwindawo yokuhlamba impahlakwaye ugcine abamhlophe bemhlophe, kodwa kubalulekile ukuba uyazi indlela yokwenza iblitshi impahla ngendlela eyiyo. Ukuba uqaphele i-bleach kwindawo yokuhlamba iimpahla, ingaba ngumhlobo wakho omhle. Ukuba awulumkanga, inokonakalisa iimpahla ozithandayo.
Igadi Tools Impilo Ne Ubuhle Izinto Zakudala Imiboniso Yesilayidi Ezizodwa Izithuba Yonke Into Blogging
imibuzo engathandekiyo yokubuza umfana wakho
uyibuyisela njani ibhodi yokucima eyomileyo
ungakanani umfazi oneminyaka eli-17 ubudala ukuba abe nobunzima
luhlobo luni lwenja endinalo kwimibuzo
ukuvuyisana nosana olutsha
imidlalo fun party abadala ngaphandle